गजल कसरी लेख्ने ? – Online Bichar
Online Bichar 12th August, 2018, Sunday 7:40 PM
यहाँ माथिको गजल पढी सकेपछी बुझ्नु पर्ने कुरा के के हुन् त? भने हामीले सिधै हेर्दा १० हरफहरु छन्। ति १० हरफलाई गजलको भाषामा “मिसरा” वा “मिस्रा” भनिन्छ. अत: यहाँ १० मिसरा वा मिश्रा छन्। माथिको गजलमा रहेका २ मिसराहरुलाई “सेर” भनिन्छन।अथवा २ वटा मिसराको संयोजनबाट एउटा सेरको निर्माण हुन्छ। त्यसैले यहाँ पुरा ५ सेरहरु छन्, भन्दा फरक नपर्ला। त्यस्तै माथिकै गजलमा प्रथम सेरको प्रथम मिसरालाई “मिसरा ए-उला” भनिन्छ र दोस्रो सेरलाई “मिसरा ए-सानी” भनिन्छ। माथिको गजलको पहिलो सेरलाई “मतला”भनिन्छ। गजलमा मुख्य २ तत्व हुन्छन। ति हुन् “रदिफ” र “काफिया”। माथि एक पटक गजलमा नजर घुमाउनु होस् त रातो मसीले लेखिएको जुन शब्द हरु क्रमश:सल्क्या, पल्क्या, टल्क्या, छल्क्या, ढल्क्या, झल्क्या, छन् ति सबै “काफिया” हुन्। त्यस्तै गरेर निलो मसिले लेखिएको छौ रे भन्ने सुन्छु चाँही “रदिफ” हो। यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा जहिले पनि “काफिया” रदिफ भन्दा पूर्ववर्ती हुन्छ। काफिया पछी आउने रदिफ हो।
तपाईहरुलाई गजलमा “बहर”, “गण”, को बारेमा पनि जान्ने इच्छा होला। म आगामी लेखहरुमा थप्दै जानेछु। अत: तपाई आफै प्रयास गर्नुहोस् गर्नु पर्ने सहयोग म गर्नेछु। प्रयोग गरिहेर्नु होस्। तपाई लाई यो बिषय कस्तो लाग्यो? लेख्न नभुल्नु होला. धन्यबाद…..लेखन यात्रा को कामना….. (स्रोत : Krishna Pyasi Blog)